ဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်မျိုးစိတ်သစ်ကြောင့် ရောဂါစမ်းသပ်မှု ပုံစံပြောင်းလဲစရာ မလိုသေး
WHO ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံး တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ဗီဇဖွဲ့စည်းပုံဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်က လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့COVID 19 ရောဂါ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု၊ ဆေးဝါး ကုသမှုနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေအပေါ်မှာ သိသိသာသာ အပြောင်းအလဲဖြစ်လောက်အောင်သက်ရောက်မှု မရှိဘူးလို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့(WHO) က ပြောပါတယ်။
တစ်ချို့ ဗီဇဖွဲ့စည်းပုံဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေက ပရိုတိန်းလက်တံမှာ ဖြစ်တာပါ။ အခု လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ စမ်းသပ် ကိရိယာ တော်တော် များများက ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အချက်အလက် မျိုးစုံကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ရှာဖွေစမ်းသပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ မျိုးစုံကို ရှာဖွေစမ်းသပ်တဲ့ ကိရိယာတွေအပေါ်မှာ သိသိသာသာ သက်ရာက်မှုမရှိပါဘူး။
ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုလောက် အပေါ်မှာပဲ ကြည့်တဲ့စမ်းသပ် ကိရိယာတွေအပေါ်မှာတော့သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်လို့WHO က နည်းပညာဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးMaria van Kokhov ကပြောပါတယ်။
WHO သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်Dr. Soumya Swaminathanကလည်း အခုအချိန်အထိ ဗိုင်းရပ်စ်ဗီဇဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေ တော်တော် များများ တွေ့ရပြီးဖြစ်ပေမယ့် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဗီဇမျိုးစိတ်တွေက လက်ရှိ စမ်းသပ်မှု၊ ဆေးကုထုံးနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေအပေါ် သက်ရောက် မှုကြီးကြီးမားမား မရှိကြောင်း၊COVID 19 ကို ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က ပုံမှန် တုပ်ကွေး ဗိုင်းရပ်စ် ထက် ပိုမိုနှေးကွေးတဲ့နှုန်းနဲ့ ဗီဇမျိုးစိတ် ပြောင်း လဲကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ဒီဗိုင်းရပ်စ်အပေါ် ဆက်လက် လေ့လာ စောင့်ကြည့်သွားဖို့ လိုကြောင်း ပြောပါတယ်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကူးစက်မှု ပိုပြီး မြန်ဆန်တဲ့ ဗီဇပြောင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးဖို့WHO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြား အစည်းအဝေး တစ်ရပ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ကျင်းပဖို့ ရှိပါတယ်။
အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေအကြား သတင်းအချက်အလက်တွေ မျှဝေနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအစည်း အဝေးကို ကျင်းပမှာလို့လည်းWHO ပြောခွင့်ရက ပြောပါတယ်။
အခုလို ဗိုင်းရပ်စ် ဗီဇဖွဲ့စည်းပုံ ဆင့်ကဲ ပြောင်းလဲမှုက ကပ်ရောဂါ အဆင့်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှုရဲ့ ပုံမှန် အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သာ ဖြစ်တာကြောင့် မစိုးရိမ်ကြဖို့WHO အဖွဲ့ကပြောသလို ဒီ ဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကို ထုတ်ဖော် တွေ့ရှိတဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံကိုလည်း ချီးကျူးထားပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့BioNTechနဲ့Modernaဆေးကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးက ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစိတ်သစ် အပေါ် ထိရောက်မှု ရှိမရှိ အဆောတလျင် စမ်းသပ်နေကြပါတယ်။
ဒီ ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် မျိုးစိတ်သစ်က ကာကွယ်ဆေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိမရှိ သိရှိရဖို့ လုံလောက် တဲ့ သတင်းအချက်အလက် မရသေးဘူးလို့လည်း WHOက ထပ်တလဲလဲ ပြောဆိုထားပါတယ်။
ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ နောကျဆုံး တှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ဗီဇဖှဲ့စညျးပုံဆငျ့ကဲပွောငျးလဲလာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈမြိုးစိတျက လကျရှိ အသုံးပွုနတေဲ့COVID 19 ရောဂါ စမျးသပျ စဈဆေးမှု၊ ဆေးဝါး ကုသမှုနဲ့ ကာကှယျဆေးတှအေပျေါမှာ သိသိသာသာ အပွောငျးအလဲဖွဈလောကျအောငျသကျရောကျမှု မရှိဘူးလို့ ကမ်ဘာ့ ကနျြးမာရေး အဖှဲ့(WHO) က ပွောပါတယျ။
တဈခြို့ ဗီဇဖှဲ့စညျးပုံဆငျ့ကဲပွောငျးလဲမှုတှကေ ပရိုတိနျးလကျတံမှာ ဖွဈတာပါ။ အခု လကျရှိ အသုံးပွုနတေဲ့ စမျးသပျ ကိရိယာ တျောတျော မြားမြားက ရောဂါ ဖွဈနိုငျခွရှေိတဲ့ အခကျြအလကျ မြိုးစုံကို ပဈမှတျထားပွီး ရှာဖှစေမျးသပျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရောဂါ ဖွဈနိုငျခွေ မြိုးစုံကို ရှာဖှစေမျးသပျတဲ့ ကိရိယာတှအေပျေါမှာ သိသိသာသာ သကျရာကျမှုမရှိပါဘူး။
ရောဂါ ဖွဈနိုငျခွတေဈခုလောကျ အပျေါမှာပဲ ကွညျ့တဲ့စမျးသပျ ကိရိယာတှအေပျေါမှာတော့သကျရောကျမှု ရှိနိုငျပါတယျလို့WHO က နညျးပညာဆိုငျရာ ညှနျကွားရေးမှူးMaria van Kokhov ကပွောပါတယျ။
WHO သိပ်ပံပညာရှငျအဖှဲ့ ခေါငျးဆောငျDr. Soumya Swaminathanကလညျး အခုအခြိနျအထိ ဗိုငျးရပျဈဗီဇဆငျ့ကဲပွောငျးလဲမှုတှေ တျောတျော မြားမြား တှရေ့ပွီးဖွဈပမေယျ့ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ ဗီဇမြိုးစိတျတှကေ လကျရှိ စမျးသပျမှု၊ ဆေးကုထုံးနဲ့ ကာကှယျဆေးတှအေပျေါ သကျရောကျ မှုကွီးကွီးမားမား မရှိကွောငျး၊COVID 19 ကို ဖွဈစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈက ပုံမှနျ တုပျကှေး ဗိုငျးရပျဈ ထကျ ပိုမိုနှေးကှေးတဲ့နှုနျးနဲ့ ဗီဇမြိုးစိတျ ပွောငျး လဲကွောငျး၊ ဒါကွောငျ့ ဒီဗိုငျးရပျဈအပျေါ ဆကျလကျ လလေ့ာ စောငျ့ကွညျ့သှားဖို့ လိုကွောငျး ပွောပါတယျ။
ဗွိတိနျနိုငျငံမှာ နောကျဆုံးတှရှေိ့ခဲ့တဲ့ ကူးစကျမှု ပိုပွီး မွနျဆနျတဲ့ ဗီဇပွောငျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကိစ်စ ဆှေးနှေးဖို့WHO အဖှဲ့ဝငျနိုငျငံတှအေကွား အစညျးအဝေး တဈရပျ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ကငျြးပဖို့ ရှိပါတယျ။
အဖှဲ့ဝငျ နိုငျငံတှအေကွား သတငျးအခကျြအလကျတှေ မြှဝနေိုငျဖို့အတှကျ ဒီအစညျး အဝေးကို ကငျြးပမှာလို့လညျးWHO ပွောခှငျ့ရက ပွောပါတယျ။
အခုလို ဗိုငျးရပျဈ ဗီဇဖှဲ့စညျးပုံ ဆငျ့ကဲ ပွောငျးလဲမှုက ကပျရောဂါ အဆငျ့ဆငျ့ ဖွဈပျေါပွောငျးလဲမှုရဲ့ ပုံမှနျ အစိတျအပိုငျးတဈရပျသာ ဖွဈတာကွောငျ့ မစိုးရိမျကွဖို့WHO အဖှဲ့ကပွောသလို ဒီ ဗီဇပွောငျးဗိုငျးရပျဈမြိုးစိတျကို ထုတျဖျော တှရှေိ့တဲ့ ဗွိတိနျနိုငျငံကိုလညျး ခြီးကြူးထားပါတယျ။
လောလောဆယျမှာတော့BioNTechနဲ့Modernaဆေးကုမ်ပဏီတှကေ သူတို့ ထုတျလုပျထားတဲ့ ကိုဗဈ ကာကှယျဆေးက ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစိတျသဈ အပျေါ ထိရောကျမှု ရှိမရှိ အဆောတလငျြ စမျးသပျနကွေပါတယျ။
ဒီ ကိုရိုနာ ဗိုငျးရပျဈ မြိုးစိတျသဈက ကာကှယျဆေးအပျေါ သကျရောကျမှု ရှိမရှိ သိရှိရဖို့ လုံလောကျ တဲ့ သတငျးအခကျြအလကျ မရသေးဘူးလို့လညျး WHOက ထပျတလဲလဲ ပွောဆိုထားပါတယျ။